Ọbịbịa ụlọ ọrụ: IMEX America na -eweghachi azụmaahịa, mmụta & njikọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Ọbịbịa ụlọ ọrụ: IMEX America na -eweghachi azụmaahịa, mmụta & njikọ
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Akwụkwọ akụkọ USA
N'ime ihe ekwụgoro dị ka 'mbata' maka ụlọ ọrụ ihe omume azụmahịa ụwa niile, IMEX America ga-eme na Nọvemba 9-11 na Las Vegas. Mbipụta nke iri nke ihe nkiri a nwere ụlọ ọhụrụ, Mandalay Bay, a ga -edobe ya ịnye ohere azụmaahịa, mmemme mmụta na -akpali akpali na ihe omume mmekọrịta na -akpali akpali, niile nọ na gburugburu ebe nchekwa mana ọ nweghị isi.
Ndị na -azụ ahịa nwere ike izute ndị na -ebubata ihe na -emetụta akụkụ niile nke ụlọ ọrụ na mmemme ahụ.
Ebe njedebe na -esonye ugbu a gụnyere Australia, Korea, Singapore, Dubai, Italy, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland, na Panama.
Ndị otu ụlọ nkwari akụ ruo taa ga -anọchite anya Radisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group, na Associated Luxury Hotels International.
Ihe ngosi dị mkpa nwere, dị ka oge niile, azụmahịa na isi ya na ndị na -azụ ahịa nwere ike izute ndị na -eweta ngwaahịa gbasara mpaghara niile nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị a gụnyere ebe njem Australia, Korea, Singapore, Dubai, Italy, Boston, Atlanta, Hawaii, Switzerland na Panama yana otu ụlọ oriri na nkwari akụ Radisson, Wyndham Hotel Group, Mandarin Oriental Hotel Group na Associated Luxury Hotels International. Argentina, Canada, Puerto Rico, Detroit, Memphis, Baltimore na Loews Hotels so na ndị na -egosi ihe gbasaa ọnụnọ ha na ihe ngosi a.
Di iche iche, ịgba egwu & agụmakwụkwọ mpaghara raara onwe ya nye
Mmemme mmụta mmụta na -akpali akpali, na -akwụghị ụgwọ na -aga n'ihu n'ime ihe nkiri a agaghị echefu ya, wee malite na Mọnde Mọnde, nke MPI kwadoro, na -eme na 8 Nọvemba, ụbọchị tupu IMEX America amalite. Dr Shimi Kang sitere na Mahadum nke British Columbia ga-ewepụta isi okwu Smart Monday, na-egosi ụzọ dabere na nyocha ọhụrụ maka ime mgbanwe, imepụta ihe ọhụrụ, imekọ ihe ọnụ na ọganiihu azụmaahịa na-adịgide adịgide.
Oge raara onwe ya nye maka otu ụlọ ọrụ dị iche iche na -enye ohere ka ndị bịaranụ hazie ahụmịhe Smart Mọnde ha. Enwere agụmakwụkwọ na ịkparịta ụka n'Ịntanet naanị maka ndị isi ụlọ ọrụ na Nzukọ Nzukọ Ọchịchị-emebere maka ndị isi ụlọ ọrụ dị elu sitere na ụlọ ọrụ Fortune 2000-na Focus Focus ọhụrụ-megheere ndị nhazi niile sitere na ụlọ ọrụ na ọkwa niile. Ndị sonyere nwere ike ịtụ anya mkparịta ụka miri emi na isiokwu ndị dị ka nhazi nzukọ, nkwurịta okwu dị irè na ndị ọrụ otu ime obodo, yana ahụike na ahụike.
Carina Bauer na Ray oge ntoju
Ndị isi otu nwere ike jikọọ ma soro ndị ọgbọ ha mụta ihe na ọgbakọ ọgbakọ ndị otu, nke ASAE mepụtara. N'ime usoro ọmụmụ ihe ọhụrụ maka 2021, ọgbakọ a na -eleba anya na ọnọdụ azụmaahịa gbanwere nke mkpakọrịta na -arụ ọrụ ugbu a. Ọgbakọ a ga -enyocha otu esi eme mgbanwe ndị bụ isi nke ọrịa na -efe efe mere, ya bụ atụmanya ndị otu dị elu, mmụba nke ndị otu, ụkpụrụ ọgbọ dị iche na nkwalite ngwa ngwa na teknụzụ.
Enwetụbeghị oge ka mma iji kwado ụdị dị iche iche na ụlọ ọrụ ihe omume azụmaahịa yana She Means Business na -eme nke ahụ. Ihe omume njikọta nke IMEX na magazin TW, nke MPI na -akwado, na -achịkọta otu ndị isi ụmụ nwanyị si n'ime na mpụga ụlọ ọrụ iji kesaa akụkọ na ndụmọdụ ha. Oké ọchịchọ, ime ihe na ịza ajụjụ: Ntọala ebumnuche ebumnuche maka ụmụnwaanyị n'ihe omume bụ nnọkọ bara uru yana ndụmọdụ gbasara otu esi enweta “nnukwu ọhụụ,” nke Juliet Tripp, onye osote onye isi ihe na -eme n'ụwa, Chemical Watch kwuru. Michelle Mason, Onye isi ala na onye isi, ASAE na onye ndụmọdụ Courtney Stanley, Courtney Stanley Consulting na -akpọ ụmụ nwoke abụọ ka ha sonye na mkparịta ụka di iche iche na Ọdịiche na nha nhata nwoke na nwanyị - ụmụ nwanyị na -achọ mkparịta ụka ha na ụmụ nwoke.
Kwa ụbọchị na -amalite site na isi okwu MPI. Ndị na-ebugharị na ndị na-ama jijiji site na mpụga ụlọ ọrụ ihe omume azụmahịa ga-eweta ihe ngosi ụwa ha pụrụ iche-tụọ anya ka dọkịta Harvard nwetara ọzụzụ, otu n'ime "ndị edemede kacha amasị n'ụwa" gbakwunyere onye guzobere otu ịgba egwu ụwa na obodo.
Ogige nkwalite mmụọ abịala ọzọ n'ụlọ iji gosipụta agụmakwụkwọ ala, na -ebuga ohere ohere mmụta na -eleba anya na azụmaahịa ngwụcha 2021. Oge na -ekpuchi imepụta ihe na nkwukọrịta; Ndịiche na nnweta; Innovation na teknụzụ; Iweghachite azụmaahịa, mkparita ụka nkwekọrịta, akara onwe onye, ​​na nkwado.
Ihe omume ọha na -enye ọmarịcha na ihe ijuanya
Ọ bụ ezie na ihe nkiri a ka bụ ebe azụmaahịa na mmụta, enwerekwa ọtụtụ ohere ijikọ na mpụga ụlọ ihe nkiri. Njem nri nri egbugbere ọnụ na-enye ọnụ ala na Las Vegas yana ụfọdụ nri kacha mma na warara. Njegharị ndị ọzọ na -enye egwu dị n'ime ebe egwuregwu abụọ: Caesar's Palace na Mandalay Bay.
Njem Mystery bụ mgbede mberede nke ahụmịhe pụrụ iche, ọnọdụ dị jụụ, nri dị egwu na nnukwu ụlọ ọrụ. “Ọ bụ ikpe amaghị ebe ọ na -aga. A na -edebe ndị mmadụ n'ọchịchịrị ruo oge ikpeazụ - ọ bụ ebe ahụ ka anwansi na -eme! " na -akọwa Onye isi ihe omimi Dave Green. Enwekwara ohere ime ememme mara mma SITE Nite North America na MPI Foundation Rendezvous.
“Anyị enweghị ike ichere ịhụ nlọghachi IMEX America wee kpọkọta obodo ihe omume azụmahịa anyị. Maka ọtụtụ ndị nọ na ụlọ ọrụ ahụ, ihe nkiri a na -arụ ọrụ dị mkpa na mgbake azụmaahịa ha ma na -anọchite anya ohere pụrụ iche izute ndị ọrụ ibe na ndị mmekọ ha na -ahụbeghị n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, ”ka Carina Bauer, onye isi otu IMEX na -akọwa.
“Anyị ejirila nlezianya hazie ihe ngosi nke nwere azụmahịa n'obi ya yana hụ na anyị na -enye ahịa ahụmịhe mmemme dabara maka oge ndị a; anyị niile na -arụ ọrụ n'ime ya. Ndị bịara ya nwere ike inwe obi ike na anyị ekepụtala ihe ngosi dị mma nke na -emezu ihe gbasara ahụike na nchekwa kachasị ọhụrụ, na -arụkọ ọrụ ọnụ na obodo nnabata anyị na ebe mgbakọ ọhụrụ. Ọdụ ụgbọ mmiri Mandalay. "
IMEX America na -eme 9 - 11 Nọvemba na Mandalay Bay na Las Vegas na Smart Monday, nke MPI kwadoro, na 8 Nọvemba. Ịdebanye aha - n'efu - pịa Ebe a. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara nhọrọ ụlọ na akwụkwọ, pịa Ebe a.
Maka akụkọ kacha ọhụrụ gbasara ihe nkiri a, pịa Ebe a. Gee onye isi oche IMEX, Ray Bloom na onye isi oche, Carina Bauer, na-ekwu maka atụmatụ maka IMEX America, mkpa ahịa pent-up, onye ngosi na ọkwa ọmụrụ nwa na ihe ọhụrụ. Mkparịta ụka ya na Carina.